Rap Legend Drake Iyo Cannabis Company Canopy Growth Jooji Nolosha Nolosha Dheeraad ah Co. • Dawooyinka Inc.eu
Halyeeygii Rap-ka Drake iyo shirkadda xashiishadda Canopy Growth ayaa xiray More Life Growth Co.
Ka dib markii ay bilaabeen hawlahooda xashiishka wadajirka ah ee 2019, waxaa la muujiyey in heesaha reer Kanada Drake iyo shirkada soo saarta xashiishadda Canopy Growth Corp ayaa dhowaan kala qaybsamay.
Arbacadii la soo dhaafay, Kobcinta Canopy waxay ku dhawaaqday inaysan ku lug lahayn xashiishka xashiishka More Life Growth Company, ka dib markii hore loogu dhawaaqay iskaashiga bishii Nofeembar 2019.
Qaab dhismeedka asalka ah ee asalka ah, waxaa la isku raacay in Drake uu sii hayn doono saamiga shirkadda 60%, isagoo ka tegaya Kobaca Canopy inuu xakameeyo inta soo hartay 40%.
Saxaafadda Canadian ayaa sameysay wararka oo la ogaa kadib Canopy Growth ayaa xareeyay dukumiintiyo maaliyadeed todobaadkan oo muujinaya in heshiiska sublicense horeyba loogu joojiyay go'aan wada jir ah horaantii bishii Maarso ee sanadkan. Dabayaaqadii bishaas, Canopy wuxuu kaloo qirey "$ 10,3 milyan oo qoritaan maalgashi ah."
Sida laga soo xigtay diiwaanka, shirkadda xashiishadda ayaa sidoo kale "qortay" ku dhowaad $ 33,7 milyan oo ah haray waajibaadka boqortooyada ee Nolol Dheeri ah isla bishaas.
Halyeeygii Rap-ka Drake iyo shirkadda xashiishadda Canopy Growth ayaa xiray More Life Growth Co. (afb.)
Sababaha ka dambeeya kala qaybsanaanta weli lama yaqaan maaddaama Drake iyo wacyigeliyayaashiisa iyo sidoo kale Kobaca Canopy aysan wali ka hadlin joojinta. Isku dhaca quwadaha waaweyn ee reer Kanada, Bloomberg waxay soo werisay inay ahayd Smiths Fall, shirkadda Ontario oo dooratay inay joojiso xiriirkeeda ay la leedahay dadka caanka ah. Iyadoo la tixraacayo bayaanka maaliyadeed ee la xareeyay toddobaadkan, kala qaybsanaanta ayaa dhacday bishii Maarso ee la soo dhaafay.
Drake maahan muusikiiste kaliya oo dhawaan ku dhawaaqay inay ku dhiiranayaan qaybta xashiishadda madadaalada sii kordheysa. Bishii Oktoobar ee sanadkii hore, bilyaneerka heesaaga ah iyo ganacsade Jay-Z ayaa sidoo kale ku dhawaaqay daahfurka shirkadiisa xashiishka Monogram.
Monogram, oo ah ganacsade heer sare ah oo ka ganacsada ubaxyada xashiishadda iyo horudhaca California, ayaa ah natiijada iskaashi dhex maray rapper iyo shirkadda xashiishadda California ee California.
Ilaha ay ka mid yihiin Bloomber (EN), Canex (EN), TheGrowthOP (EN)
Xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee 'Undercover' wuxuu ahaa mid toos ah oo ku dhuftey saqafka Nederland ...
Hemp isku darka - waxaad ku sameyn karto 2 nooc oo caleenta xashiish ah
Caleemaha haraaga ah ee xashiishadda gebi ahaanba qashin ma aha. Xaqiiqdii, waad